I-Gryposaurus - Iinkcukacha kunye nezibalo
I-Gryposaurus (isiGrike esithi "i-lizard-nosed lizard"); i-GRIP-oh-SORE-yethu
Woodlands yaseNyakatho Melika
I-Cretaceous yaseLate (iminyaka eyi-85-75 yezigidi edlulileyo)
Ukufika kuma-40 ubude ubude kunye neetoni ezintlanu
Ixesha elide; inqwaba enkulu ekhaleni; ukunyanzelwa kwesibindi
Ngeendlela ezininzi i- hadrosaur efana ne-drosaur-ekhokhelwe i-dinosaur-ye-North- Cretaceous North America, i-Gryposaurus yaziwa ngumntu oqaqambileyo, wayihlahlela ephupheni layo, apho igama layo "li-li-hook-nosed lizard") livela.
Njengamanye ama-dinosaurs angamaxhoba (njengama-horned, ama- ceratopsia aqotyosweyo ), i-paleontologists icacisa ukuba le nto iguquke njengento ekhethiweyo ngokwesondo - okokuba, iindoda ezinamakhulu amaninzi, ezivelele zikhangeleka kubesifazane ngexesha lexesha lokukhula. Nangona kunjalo, i-Gryposaurus isenokusebenzisa i-schnozz yayo enkulu ukuze idibanise kwaye ilawule ngamalungu omhlambi, o baqaphele ukuba bahlasele i- raptors kunye ne- tyrannosaurs , kwaye (mhlawumbi mhlawumbi ngaphantsi) mhlawumbi badibanisa iimbombo zalaba badlayo kunye neempumlo zabo ukubagxotha.
Njengamanye ama-hadrosaurs, i-30-foot-long-long, iitoni ezimbini, ukutya izityalo-Gryposaurus kwakufana nokuziphatha kwezibhunge kunye ne-buffalo zanamhlanje-kwaye ezininzi iimboniselo ze-fossil ezithe zafunyanwa ngaphesheya kweMntla Melika ziyinto enamandla ukuba le dada- I-dinosaur ekhokhiswayo ijikeleze ilizwekazi ngeenkomo (nangona ukuba ezi zifuyo ziqulethe ezimbalwa, ambalwa ambalwa, okanye amawaka ambalwa abantu akakwazi ukuthetha).
Nangona kunjalo, kukho umehluko obalulekileyo phakathi kwala ma-orrosaurs yasendulo kunye neenkomo zanamhlanje (okanye i-wildebeest): xa zihlaselwa yizilwanyana, i-Gryposaurus ikwazi ukuqhuba ngokufutshane emilenzeni yayo yezintathu, okumele ukuba yenzelwe ukubonwa kwamehlo ngexesha lokunyathela!
Igama elithi Gryposaurus lisoloko lisetyenziselwa ngokungafaniyo ne- Kritosaurus , ngenxa yokudideka okujikeleze le ngxelo yomnxeba we-dinosaur.
Uhlobo lwe-fossil lweGryposaurus lwafunyanwa kwiPhondo lase-Canada lase-Alberta ngowe-1913, kwaye kamva lachazwa kwaye laqanjwa ngu- Lawrence Lambe wasePanada . Nangona kunjalo, umzingeli waseMelika uBarum Brown wayefumene uhlobo olulinganayo kwiminyaka embalwa ngaphambili, eNew Mexico, owathiwa nguKritosaurus ("olwahlukileyo"). I-Gryposaurus skeleton echazwe yiLambe inikezela ngeenkcukacha ezongezelelweyo malunga nokuhlaziywa ngokufanelekileyo kwe-kritosaurus skeleton, kwaye nangona uBrown ngokwakhe ecetyisa ukuba le mibini imele ukuba "ibonakaliswe," baye bakwazi ukuqhubeka bephila namhlanje. (Asiyi kuphinda sichaze isiphakamiso sikaJack Horner sokuba zombini iGryposaurus kunye neKritosaurus kufuneka baboniswe kunye neHadrosaurus !)
Namhlanje, kukho iintlobo ezintathu eziqhelekileyo ezifunyenweyo zeGryposaurus. Uhlobo lwesityalo, i- G. notabilis , iyaziwa malunga neengqayi ezimbini, kunye nezinye iifomim e zimbini ezithe zagqitywa kwintlobo yesigxina esivela ku-G . incurvimanus . Intlobo yesibini, iG. latidens , yafunyanwa eMontona; limelelwe ngabantu abancinci kuneG. notabilis , impumlo egxininisiweyo yale ntlobo yabekwa ngaphezu kwayo iminyango yayo kunye namazinyo ayo ayencinci athatyathwayo (ukubuyisela emuva kwii- Iguanodon ngaphambili).
Ekugqibeleni, kukho iG. monumentensis , ebizwa ngo-2007 emva kokufunyanwa komntu omnye e-Utah. Njengoko usenokuqikelela ukusuka egameni layo, le ntlobo yeGryposaurus yayinkulu kunezinye, abanye abantu abadala bafikelela kwiimitha ezingama-40 ubude kunye nezisindo kwiindawo ezingamakhulu amahlanu.
I-Therizinosaurs - I-Dinosaurs i-Weirdest
U-Hillary Clinton we-2016 Spotify Uhlu lwadlalwayo - Ingoma Ngomahlalutyo lweNgoma
Ubomi beNdlovukazi ye-Queen Bumblebee
Biography kaMalcolm Gladwell
Ilanga e-Aries - Uphawu lweZodiac